Dooddii musharaxiinta madaxweynaha oo maanta lagu kala tagey – STAR FM SOMALIA
Inta badan musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Somaliya, ayaa qaadacay doodda musharaxiinta, oo loo ballansanaa in ay maanta dhacdo.
Musharax Maxamed Cali Nuur (Ameeriko), ayaa sheegay in badi musharaxiinta ay isu raaceen go’aanka ah inaan laga qaybgalin doodaasi, isaga oo sidoo kalena sharaxay sababta ay ku qaadaceen.
Waxa uu tilmaamay in laga baxay is faham horey u dhex maray musharaxiinta iyo guddiga doorashada, kaasi oo ku aadanaa qaabka tebinta doodda iyo weliba cidda dhex dhexaadin doonta.
Ballanta, ayuu sheegay inay ahayd in dhammaan telefishinnada iyo idaacadaha dalka, ee madaxa bannaan ay si isu mid ah u tebiyan, balse keliya lagu soo koobay in ay baahiso Warbaahinta Qaranka.
Sidoo kale Musharax Madaxweyne, Maxamed Cali Nuur, ayaa sheegay in waxyaabaha ay diidan yihiin ka mid tahay arrinta ku aadan cidda dhex dhexaadineysa doodda, taasi oo uu sheegay in lagu heshiiyay wada tashi in laga geliyo, balse aysan dhicin.
Ugu dambeen Ameeriko, ayaa tilmaamay in gelinka dambe ee maanta ay saxaafadda kula hadli doonaan magaalada Muqdisho iyaga oo ah musharaxiin dhowr ah, ayna shaacin doonaan arrintan iyo qoddobada ay ku diideen doodda.
Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan), ayaa dhinaciisa sheegay inaysan suuragal ahayn dad u ololeynaya Xasan Sheekh Maxamuud in ay maamulaan doodda, isla-markaana saxaafadda xorta ah loo diido tebinta doodaasi.